अंग्रेजी नयाँ वर्ष २०१९: कसरी मनाऊँदै छन् कलाकारले ? | Nayashaktionline.com-No.1 News portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment,Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview, International News, Local News, Nepal News, All News, Total News, News, News of Nepal, Our Nepal, Every News, Bhaktapur, Kathmandu, Lalitpur All Nepalअंग्रेजी नयाँ वर्ष २०१९: कसरी मनाऊँदै छन् कलाकारले ?
Home मनोरञ्जन अंग्रेजी नयाँ वर्ष २०१९: कसरी मनाऊँदै छन् कलाकारले ?
काठमाडौं : मंगलवारबाट इस्वी संवत्को नयाँ वर्ष २०१९ शुरू भएको छ । नयाँ वर्ष नेपालीसहित विश्वभर एकआपसमा शुभकामना आदानप्रदान गर्दै मनाइन्छ ।
नेपाली कलाकारले अंग्रेजी नयाँ वर्ष कसरी मनाइरहेका छन् ? आज हामीले कलाकारले मनाइरहेको नयाँ वर्षबारे जानकारी संकलन गरेका छौ।
बीमा जागरण अभियानमा धुर्मुस–सुन्तली
हाँस्य कलाकार सिताराम कट्टेल ‘धुर्मुस’ र कुञ्जना घिमिरे ‘सुन्तली’ दार्चुलामा छन् । सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको ब्राण्ड एम्बास्डर उनीहरू छोरीसहित बीमा जागरण कार्यक्रमका लागि दार्चुला पुगेका छन् ।
गाउँगाउँमा व्यस्त रहनुपर्दा अंग्रेजी नयाँ वर्ष सेलिब्रेसनको कुनै योजना नरहेको सितारामले बताए । ‘गाउँगाउँमा पुगेर बीमासम्बन्धी सचेतना जनाउनमै व्यस्त हुनेछौं,’ सितारामले भने । १६ गते बैतडी जिल्लाबाट बीमा जागरण कार्यक्रम शुरू गरिएको सितारामले बताए ।
दीपाश्रीको नयाँ वर्ष बालगृहमा
कलाकार तथा निर्देशक दीपाश्री निरौलाले अंग्रेजी नयाँ वर्ष फर्पिङमा रहेको जीवन उत्थान बालगृहमा मनाउँदै छिन् । ‘न्यू इयर सेलिब्रेसन राम्रो कामबाट गरौं भनेर यहाँ आएका छौं,’ भनिन्, ‘आज मेरो दाई अनुराग कुवँरको जन्मदिन पनि परेकाले बालगृहका बालबालिकामाझ सेलिब्रेसन गर्दैछौं ।’
कलाकार निर्मल शर्मा, नायक रमेश उप्रेती लगायत न्यू इयर सेलिब्रेसनका लागि फर्पिङ पुगेको दीपाश्रीले बताइन् ।
योजनाविहीन निश्चल बस्नेत
निर्देशक तथा अभिनेता निश्चल बस्नेतको नयाँ वर्ष सेलिब्रेसनको कुनै योजना छैन । ‘म त पोखराबाट फर्किंदै छु,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म कुनै योजना बनेको छैन । काठमाडौं पुगेपछि के हुन्छ ? हेरौ ।’ पत्नी स्वस्तिमा खड्का सुटिङमा व्यस्त रहेका कारण पनि सेलिब्रेसनको मौका नमिल्ने निश्चलले बताए ।
प्रमोसनमा व्यस्त वर्षा राउत
नायिका वर्षा राउतको नयाँ चलचित्र ‘चौकादाउ’ पुस २७ गतेबाट प्रदर्शनमा आउँदैछ । वर्षा यतिबेला चलचित्रको प्रमोसनमा व्यस्त छिन् । त्यसैले पनि अंग्रेजी नयाँ वर्ष सेलिब्रेसनको कुनै विशेष योजना नरहेको उनले बताइन् ।
वर्षाले भनिन्, ‘त्यस्तो स्पेसल केही योजना छैन । आजबाट मोफसल प्रमोसनमा जाँदैछौं ।’ मंगलवार हेटौडा र नारायणगढमा पुगेर सञ्चारकर्मीमाझ भेटघाट गर्ने उनले बताइन् ।
मिस अफ्रिका २०१८ को कपालमा आगो लागेपछि… (भिडियो)